Bit By Bit - နိဒါန်း
ဤစာအုပ်သည်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကမြေအောက်ခန်းထဲမှာ 2005 ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်မှာငါကဘွဲ့ရကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်, ငါနောက်ဆုံးမှာငါ့အစာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အွန်လိုင်းမှစမ်းသပ်မှုအပြေးခဲ့သည်။ ငါအခနျးကွီး4အတွက်စမ်းသပ်မှု၏သိပ္ပံနည်းကျအစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းကိုသင်တို့ရှိသမျှကိုပြောပြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ယခုငါသည်ငါ့စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း၌ဖြစ်စေ, ငါ၏စာတမ်းများမဆိုမယ့်အရာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုသင်ပြောပြသွားတာပါ။ ထိုသို့အခြေခံကျကျငါသုတေသနစဉ်းစားပုံကိုပြောင်းလဲတစ်ခုခုပါပဲ။ ငါသည်ငါ့မြေအောက်ခန်းရုံးသို့ကြွတော်မူလာသောအခါတစျခုမှာနံနက်, ငါသည်ဘရာဇီးကနေနေ့ချင်းညချင်း 100 ခန့်ကလူကိုငါ့စမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့ဖူးကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့အတှေ့အကွုံငါ့ကိုပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကငါရိုးရာဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်အပြေးခဲ့ကြသောသူမိတ်ဆွေများကရှိခဲ့ပါတယ်, ငါသူတို့က, စုဆောင်းကြီးကြပ်, ဤစမ်းသပ်ချက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လူဆပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဘယ်လောက်ခက်ခဲ သိ. , သူတို့တစ်တွေတနေ့ခြင်းတွင်လူ 10 ကို run နိုင်မယ်ဆိုရင်, ထိုကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအိပ်ပျော်စဉ်သို့သော်ငါ၏အအွန်လိုင်းစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ, လူ 100 ပါဝင်ခဲ့။ သင်တို့အိပ်ပျော်နေစဉ်သင့်ရဲ့သုတေသနလုပ်နေတာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောအသံ, ဒါပေမယ့်မပေလိမ့်မည်။ အထူးသနည်းပညာ-in ကိုအပြောင်းအလဲများယခုကြှနျုပျတို့အသစ်သောနည်းလမ်းတွေနဲ့လူမှုရေးဒေတာစုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သောဒီဂျစ်တယ်ခေတ်-ယုတ်ဖို့ Analog စအရွယ်ကနေအကူးအပြောင်း။ ဤစာအုပ်သည်ဤအသစ်သောနည်းလမ်းတွေနဲ့လူမှုရေးသုတေသနလုပ်နေတာအကြောင်းပါ။
ဤစာအုပ်ကပိုဒေတာသိပ္ပံ, ပိုပြီးလူမှုရေးသိပ္ပံလုပ်ချင်သူကိုဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များ, ဤကွက်လပ်နှစ်ခုကို၏ဟိုက်ဘရစ်အတွက်စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆိုလုပ်ချင်သောသူသည်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များအဘို့ဖြစ်၏။ ဤစာအုပ်အဘို့ဖြစ်၏သူသည်ပေးထားသောကြောင့်ကျောင်းသားများနှင့်ပါမောက္ခများအဘို့မဖြောင့်ဟုမပါဘဲသွားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်မလက်ရှိတက္ကသိုလ် (Princeton) မှာအလုပ်မလုပ်ပေမယ့်ငါသည်လည်း (အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုမှာ) အစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် (Microsoft မှသုတေသနမှာ) ဒါကြောင့်ငါပြင်ပတွင်ဖြစ်ပျက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သုတေသနတွေအများကြီးရှိကွောငျးကိုသိပါတယ် တက္ကသိုလ်များ။ သင်လူမှုရေးသုတေသနအဖြစ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားလျှင်, ဤစာအုပ်, သင်တို့အဘို့အသငျသညျအလုပ်မလုပ်ဘယ်မှာနေပါစေသို့မဟုတ်ဘယ်လိုနည်းစနစ်၏သင်လက်ရှိအသုံးပြုပါ။
သငျသညျပြီးသားသတိပြုမိကြလိမ့်မယ်အဖြစ်, ဤစာစောင်၏လသေံများစွာသောအခြားပညာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကို၏ထံမှနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပါပဲ။ ဤစာအုပ်သည်ကျနော် 2007 ခုနှစ်ကတည်းကလူမှုဗေဒဦးစီးဌာနအတွက် Princeton မှာသွန်သင်ကြပြီကွန်ပျူတာလူမှုရေးသိပ္ပံအပေါ်တစ်ဦးဘွဲ့ရနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကနေပေါ်ထွက်လာ, ငါကနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကနေစွမ်းအင်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုဖမ်းချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, ငါသညျဤစာအုပ်သုံးဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်ဖို့လိုခငျြ: ငါကထောကျအကူပွုအနာဂတ်-oriented နှင့်အကောင်းမြင်ဖြစ်ချင်တယ်။
အထောကျအကူ: ငါ့အရည်မှန်းချက်သင်တို့အဘို့အထောကျအကူပွုသောစာအုပ်ရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ငါ, ပွင့်လင်းအလွတ်သဘောနှင့်ဥပမာ-မောင်းနှင်စတိုင်ရေးလိုက်ပါမယ်။ ငါသိရှိစေရန်ချင်သောအရေးအပါဆုံးအရာကလူမှုရေးသုတေသနအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချို့သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပါပဲ။ နှင့်အညီ, ငါ၏အတှေ့အကွုံမြားအတှေးအချေါ၏ဤလမ်းဖျောပွဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအလွတ်သဘောနှင့်ဥပမာအများကြီးနဲ့အတူကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးချင်းစီအခနျးကွီးရဲ့အဆုံးမှာ, သင်တို့ကိုငါငါမိတ်ဆက်ပေးသောအကြောင်းအရာများများစွာကိုအပေါ်အသေးစိတ်နှင့်နည်းပညာဖတ်သို့ပြောင်းလဲကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု "ဘာကိုနောက်ကိုဖတ်ရှုဖို့" လို့ချေါတဲ့အပိုင်းရှိသည်။ အဆုံး၌, ငါသည်ဤစာအုပ်ကိုသင်နှစ်ဦးစလုံးတခြားသူတွေရဲ့သုတေသနပြုလေ့လာခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ကြဘူးကူညီပေးပါမည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အနာဂတ်-oriented: ဤစာအုပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ယနေ့တည်ရှိကြောင်းစနစ်များနှင့်အနာဂတျတှငျနေသူများကဖန်တီးပါလိမ့်မည်သောသူတို့ကိုအသုံးပြီးလူမှုရေးသုတေသနပြုပါရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။ ငါ 2004 ခုနှစ်ကသုတေသနဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာစတင်ခဲ့ပြီး, ပြီးတော့ကတည်းကတော့အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ပြီးပြီ, ငါသည်လည်းသင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏သင်တန်းကျော်သင်သည်လည်းအများအပြားအပြောင်းအလဲများကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှု၏မျက်နှာကိုအတွက်သက်ဆိုင်ရာတည်းခိုဖို့လှည့်ကွက် abstraction ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ဒီကယနေ့တည်ရှိအဖြစ်တွစ်တာ API ကိုသုံးစွဲဖို့အတိအကျသင်မည်သို့သွန်သင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်သွားသည်မဟုတ်, အစားကြောင့်ဘယ်လိုကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ် (အခန်း 2) ကနေသင်ယူဖို့သင်ကသင်ပေးမယ်။ ဒါဟာသင် step-by-step ညွှန်ကြားချက်အမေဇုံစက်မှု Turk အပေါ်စမ်းသပ်ချက်အပြေးအဘို့ပေးသည်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်သွားသည်မဟုတ်, အစားကြောင့်ဘယ်လိုဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခန်း 4) ရက်နေ့တွင်အားကိုးကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်အနက်ကိုဘော်ပြရန်သင့်အားသင်ပေးမယ်။ abstraction ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်, ငါသည်ဤအချိန်မီခေါင်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦး timeless စာအုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အကောင်းမြင်: ဤစာအုပ်ပါဝငျ-လူမှုရေးအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံနှင့်အကျိုးစီးပွားသိပ္ပံပညာရှင်များ-ရှိသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အချက်အလက်အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု။ ငါကမျြးစာ၌အကြောင်းပြောဆိုသောဤသိပ္ပံ-related ကွဲပြားမှု, အပြင်, ငါသညျလညျးထိုအလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များရှိသည်သတိပြုမိပါတယ်။ ဒေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်များယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်; သူတို့ထက်ဝက်အပြည့်အဝအဖြစ်ဖန်ကြည့်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်တွေ, အခြားလက်ပေါ်, ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးအရေးပါပါ၏ သူတို့အချည်းနှီးသောဝက်အဖြစ်ဖန်ကြည့်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ဤစာအုပ်၌ငါဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များ၏အကောင်းမြင်သေံချမှတ်သွားတာပါ။ ကျွန်မဥပမာတင်ပြသည့်အခါဒီတော့ငါသည်ဤဥပမာအကြောင်းကိုကိုချစ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောဖို့သွားတာပါ။ နှင့်အညီ, ရသောအခါကျွန်မနှင့်အတူပြဿနာများကိုထောက်ပြကြဘူးဥပမာ-နှင့်ငါမသုတေသနလုပ်ငန်းစုံလင်သော-လြှံအပြုသဘောနှင့်အကောင်းမြင်သောလမ်းအတွက်ဒီပြဿနာတွေကိုထောက်ပြဖို့ကြိုးစားသွားသောကွောငျ့ကြောင်းပြုလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ပိုကောင်းသုတေသနဖန်တီးကူညီနိုင်အောင်အရေးပါဖြစ်မယ့်အရေးပါ-လြှံဖြစ်ခြင်း၏မျက်နှာကို ထောက်. အရေးပါဖြစ်မသွားဘူး။
ကျနော်တို့ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ထဲမှာလူမှုရေးသုတေသန၏အစောပိုင်းကာလများတွင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်ငါငါ့ကိုနိဒါနျးပိုငျးအတွက်, ဒီမှာကသူတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အဘို့အကသဘာဝကျပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုံဖြစ်ကြောင်းအချို့သောနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမြင်ကြပါတယ်။ ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များအနေဖြင့်, ငါနှစ်ဦးကိုဘုံနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမြင်ကြပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကပိုဒေတာကိုအလိုအလျောက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ကြောင်းစဉ်းစားနေသည်။ သို့သော်လူမှုရေးသုတေသနအဘို့, သောငါ၏အတှေ့အကွုံဖူးခြင်းမရှိသေးပေ။ တကယ်တော့ပိုဒေတာ-ပုံပေါ်ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်ရန်ဆန့်ကျင်ဒေတာ-အဖြစ်ပိုကောင်းလူမှုရေးသုတေသနသည်။ ငါဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များအနေဖြင့်မြင်ရပါတယ်ကြောင်းဒုတိယနားလည်မှုလွဲလူမှုရေးသိပ္ပံဘုံသဘောမျိုးရစ်ပတ်ဖန်စီဟောပြောချက်ပဲတစည်းကြောင်းစဉ်းစားနေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်-ပိုပြီးတိတိကျကျတစ်လူမှုဗေဒပညာရှင်-ငါနှင့်အတူသဘောမတူဘူးသကဲ့သို့။ စမတ်ကလူတစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာသောလူ့အပြုအမူကိုနားလည်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြနှင့်ဤအားထုတ်မှုကနေစုဆောင်းထားပါတယ်သောပညာကိုလျစ်လျူရှုဖို့ပညာမဲ့ပုံရသည်။ ငါမြော်လင့်ဤစာအုပ်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူကြောင်းတစ်လမ်းအတွက်သင်ပညာ၏အချို့သောပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များအနေဖြင့်ငါသည်လည်းနှစ်ခုဘုံနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမြင်ကြပါတယ်။ ရှေးဦးစွာငါလူအခြို့သောကွောငျ့အနည်းငယ်ဆိုးရွားစာတမ်းများ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက် tools တွေကိုသုံးပြီးလူမှုရေးသုတေသနတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကူးချွတ်ရေးဖို့ကိုမြင်ရပါတယ်။ သင်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းဆိုရင်တော့သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသား banal သို့မဟုတ်မှားယွင်းတဲ့ (သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး) ဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာဆိုရှယ်မီဒီယာဒေတာအသုံးပြုစာတမ်းများတစည်းကိုဖတ်ပါတယ်။ ငါ့မှာလည်းရှိတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အားလုံးဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်လူမှုရေးသုတေသနမကောင်းတဲ့ကြောင်းကိုဤဥပမာအနေဖြင့်ကောက်ချက်ချရန်အလေးအနက်အမှားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့သင်ကဖြစ်ကောင်းလည်း banal သို့မဟုတ်မှားယွင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေအတွက်စစ်တမ်းကောက်ဒေတာအသုံးပြုစာတမ်းများတစည်းကိုဖတ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကစစ်တမ်းများသုံးပြီးအားလုံးသုတေသနလုပ်ငန်းကိုချွတ်ရေးလိုက်ကြပါဘူး။ သငျသညျစစ်တမ်းဒေတာနှင့်အတူပြုသောအမှုအကြီးအသုတေသနရှိကွောငျးကိုသိသောကြောင့်ကြောင့်, ဤစာအုပ်ထဲတွင်ငါဒစ်ဂျစ်တယ်အသက် tools တွေကိုနှင့်အတူပြုသောအမှုအကြီးအသုတေသနလည်းရှိကွောငျးသငျသညျကိုပြသပါမယ်။
ငါလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှသောဒုတိယဘုံနားလည်မှုလွဲအနာဂတ်မှာနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်ရောထွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒီဂျစ်တယ်အတွက်လူမှုရေးသုတေသနအကဲဖြတ်ရန်သောအခါငါကိုဖော်ပြရန်-ကယ့်တာကြောင့်အသက်အရွယ်-သုတေသနကျနော်တို့နှစ်ခုကွဲပြားမေးခွန်းများမေးကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်: "? ဘယ်လိုကောင်းကောင်းအခုသုတေသနအလုပ်၏ဤစတိုင်မ" နှင့် "ဘယ်လိုကောင်းကောင်းလိမ့်မည်၏ဤစတိုင် အနာဂတ်တွင်သုတေသနပြုအလုပ်? "သုတေသီများကပထမဦးဆုံးမေးခွန်းကိုဖြေဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေမယ့်ဤစာအုပ်ကိုဘို့ငါဒုတိယမေးခွန်းကပိုအရေးကြီးပါတယ်ထင်နေကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်သုတေသန၏တိုးတက်မှုနှုန်းမယုံနိုင်လောက်အောင်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပါသည်, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနသေးကြီးမား, ပါရာဒိုင်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ဉာဏပံ့ပိုးမှုများကိုထုတ်လုပ်မရှိသေးပေသော်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပြောင်းလဲမှု-ပိုပြီးလက်ရှိအဆင့်ကို-ကြောင်းငါ့ထံသို့ဒါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်သုတေသနစေသည်ထက်၏ဤနှုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအပိုဒ်အနာဂတျတှငျအခြို့သောမသတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်သင်ကအလားအလာစည်းစိမ်ဥစ္စာပူဇော်ဖို့ထင်သော်လည်း, ငါ့ရည်မှန်းချက်သုတေသနမဆိုအထူးသဖြင့်အမျိုးအစားပေါ်တွင်သင်ရောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါအပြည့်အဝထုတ်ဖော်၏မျက်နှာကို ထောက်. , ငါမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ် Microsoft ကမှသုတေသနရန်ပုံငွေကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းသင့်တယ်ပေမယ့် (Twitter, Facebook, Google, Microsoft, Apple က, သို့မဟုတ်အခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီထဲမှာမပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကိုယ်ပိုင်ရှယ်ယာလုပ်ပေး Google နှင့် Facebook မှ) ။ ကွာငါအခြားသူတွေကိုမြင်ရပါတယ်ကြောင့်အနည်းငယ်ထောင်ချောက်ထဲကနေသင်ကလမ်းညွှန်ထဲသို့ကျ (နှင့်ရံဖန်ရံခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စကျဆင်းသွား) အနေဖြင့်စာအုပ်တစ်လျှောက်လုံးထို့ကြောင့်ငါ၏အရည်မှန်းချက်, ဖြစ်နိုင်သမျှသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းသင့်ပြောပြတစ်ဦးယုံကြည်ဇာတ်ကြောင်းပြောဆက်လက်တည်ရှိရန်ဖြစ်ပါသည် ။
လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်အချက်အလက်သိပ္ပံများ၏လမ်းဆုံတခါတရံကွန်ပျူတာလူမှုရေးသိပ္ပံဟုခေါ်သည်။ တချို့ကဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလယ်ပြင်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားပါ, သို့သော်ဤအစဉ်အလာအသိတစ်ခုနည်းပညာဆိုင်ရာစာအုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာ, အဓိကစာသားထဲမှာမပါညီမျှခြင်းရှိပါတယ်။ ငါကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ်, စစ်တမ်းများ, စမ်းသပ်ချက်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းနှင့်ကျင့်ဝတ်အပါအဝင်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနတစ်ခုပြည့်စုံအမြင်, ပေးချင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စာအုပ်ကဤလမ်းရေးသားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာသမျှသောဤအကြောင်းအရာများကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်အသီးအသီးတွေအကြောင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ထွက်လှည့်။ အဲဒီအစား, ပိုပြီးနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထောက်ပြတစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းအဆုံးမှာအပိုင်း "လာမယ့်ဖတ်ရှုဖို့အဘယျ" ထဲမှာပေးအပ်ထားတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဤစာအုပ်ကိုဘယ်လိုမဆိုတိကျတဲ့တွက်ချက်မှုပြုပါရန်သင့်အားဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့ဒီဇိုင်းမမူ မဟုတ်ဘဲ, ကသငျသညျလူမှုရေးသုတေသနစဉ်းစားသောလမ်းကိုပြောင်းလဲဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ငါအစောပိုင်းကပြောခဲ့သကဲ့သို့, ဤစာအုပ်ကိုကျွန်မ Princeton မှာ 2007 ခုနှစ်ကတည်းကဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပါတယ်ကွန်ပျူတာလူမှုရေးသိပ္ပံအပေါ်တစ်ဦးဘွဲ့ရနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကနေစိတျအပိုငျးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သင်တစ်ဦးသင်တန်းသင်ပေးဖို့ဤစာအုပ်ကိုသုံးပြီးစဉ်းစားစေခြင်းငှါကတည်းကငါကငါ့အသင်တန်းနှင့်မည်သို့ငါကအခြားအသင်တန်းများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိစိတ်ကူးထဲကကြီးပြင်းပုံကိုရှင်းပြဖို့အတှကျအထောကျအကူဖြစ်အံ့သောငှါစဉ်းစားမိတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ဘဲငါသင်တန်းသှနျသငျ; ကိုယ့်ဆောင်းပါးတစ်ဦးစုဆောင်းမှု assign ချင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများကိုဒီဆောင်းပါးတွေထဲကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်နေစဉ်, တစ်ယောက်တည်းဆောင်းပါးများကိုငါဖန်ဆင်းဖို့မျှော်လင့်သောအယူအဆရေးရာအပြောင်းအလဲများမှဦးဆောင်မခံခဲ့ရပါ။ ဒါနဲ့ကျောင်းသားကြီးတွေရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါကကူညီနိုင်ရန်အတွက်ရှုထောင့်, အခြေအနေနှင့်အကြံပေးချက်ကိုပေးလူတန်းစားအတွက်အချိန်အများစုကိုဖြုန်းလိမ့်မယ်။ ဤစာအုပ်သည်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်အတွက်လူမှုရေးသိပ္ပံသို့မဟုတ် data ကိုသိပ္ပံဖြစ်စေ၏စည်းကမ်းချက်များရှိပါတယ်တဲ့လမ်းအတွက်သမျှသောရှုထောင့်, အခြေအနေနှင့်အကြံပေးချက်ကိုရေးချငါ့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးစာသင်ကြာသင်တန်း၌ငါအပိုဆောင်းဖတ်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူဤစာအုပ်တွင်ချိတ်တွဲအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းစမ်းသပ်ချက်အပေါ်နှစ်ပတ်အတွင်းဖြုန်းမယ်, သင်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်ချက်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် Pre-ကုသမှုအချက်အလက်များ၏အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်အကြောင်းအရာများအပေါ်ဖတ်နှင့်အတူအခနျးကွီး4တွဲနိုင်ပါ, ကုမ္ပဏီတွေမှာအကြီးစား A / B စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်ကြီးပြင်းစာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာကိစ္စများ; အထူးသယန္တရားများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စမ်းသပ်ချက်၏ဒီဇိုင်းကို; ထိုကဲ့သို့သောအမေဇုံစက်မှု Turk အဖြစ်အွန်လိုင်းအလုပ်သမားစျေးကွက်မှသင်တန်းသားများကို အသုံးပြု. နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်လက်တွေ့သိပ္ပံနည်းကျနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို။ ဒါဟာအစပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖတ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူတွဲနိုငျသညျ။ ဤအများစွာကိုတတ်နိုင်သမျှဒဿနိကဗေဒအကြားသင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုကိုသင့်ရဲ့သင်တန်း (ဥပမာ, ဘွဲ့ကြို, သခင်၏, ဒါမှမဟုတ်ပါရဂူဘွဲ့), သူတို့ရဲ့နောက်ခံ, သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များအတွက်ကျောင်းသားများကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တစ်ဦးကစာသင်-အရှည်သင်တန်းအပတ်စဉ်ပြဿနာအစုံလည်းပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခနျးမှာအခက်အခဲများစွာဒီဂရီအားဖြင့်အမည်တပ်ထားသောဖြစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်: လွယ်ကူသော ( ), အလယ်အလတ် ( ), ခဲယဉ်း ( ), နှင့်အလွန်ခဲယဉ်း ( ) ။ သင်္ချာ (: ဒါ့အပြင်ကိုယ်ကလိုအပ်ပါတယ်သောကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကပြဿနာတံဆိပ်ကပ်ပါတယ် ), code ( ), နှင့်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း ( ) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ (ငါ့အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံးသောလှုပ်ရှားမှုများအနည်းငယ်တံဆိပ်ကပ်ပါတယ် ) ။ ငါလှုပ်ရှားမှုများ၏ဤကွဲပြားခြားနားစုဆောင်းခြင်းအတွင်း, သင်သည်သင်၏ကျောင်းသားများအတွက်သင့်လျော်သောများမှာအချို့ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်တန်းများအတွက်ဤစာအုပ်ကိုသုံးပြီးလူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလို syllabuses, ဆလိုက်တစ်ခုစီမျြးအခနျးကွီးအတှကျအကြံပြုမောငျနှံနှင့်အချို့လှုပ်ရှားမှုများမှဖြေရှင်းချက်အဖြစ်သင်ကြားရေးပစ္စည်းများတစ်ဦးစုဆောင်းမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤပစ္စည်းများနှင့်တွေ့ရှိရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသူတို့ကို-မှာ http://www.bitbybitbook.com နိုင်ပါတယ်။